ဖယ်ဒရယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ 12 ရက် 2013 ခုနှစ် ခိုနူမ်းထုန် ဆောင်းပါး – ခိုနူမ်းထုန် သတင်းဌာန ဖယ်ဒရယ်ဆိုသောဝေါဟာရ သည် ရောမစကား Foedus မှ အမြူတေ၍ ဆင်းသက် လာပြီး၊ စုပေါင်း သဘောတူ စာချုပ်အရ ဖွဲ့စည်းခြင်းဟု အဓိပါယ်ရပါသည်။ ဖယ်ဒရယ်နိုင်ငံ သည်လည်း လွတ် လပ်သောနယ် ပယ် များမှ ဘုံအကျိုး တူစီးပွားရေးအတွက် သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး၊ အချုပ် အချာပိုင်နိုင်ငံတခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကာ၊ ဒီမိုကရေ စီစံနစ်ကိုအခြေခံပြီး အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံဟု ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံ ယူဆထားပါ သည်။
ဖယ်ဒရယ်နိုင်ငံများတွင် အစိုးရအာဏာအား ယေဘုယျအားဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာစာရင်း သုံးမျိုးခွဲ ခြားထား လေ့ရှိပါသည်။ ဗဟို/ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရလုပ်ပိုင် ခွင့်အာဏာ (Central/ Federal list) ၊ အဖွဲ့ဝင် / ပြည် နယ်အစိုးရ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ (State list) ၊ နှင့် ထပ်တူ အညွှန်းပြု အာဏာ (Concurrent list) ဟူ၍ ဖြစ် သည်။
Central/ Federal list တွင် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ဆိုင်သောအရာများဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး၊ ငွေကြေးဒင်္ဂါးပြုလုပ်ခြင်း၊ ရထား ပို့ဆောင်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း …etc…များ ပါဝင် သည်။ ၎င်းလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်အစိုးရ များမှ အပ်နှင်းလေ့ရှိ ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင် ဖယ်ဒ ရယ်အစိုးရမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ ၁၈ ခု အပ်နှင်းထား ပါသည်။
ပြည်နယ်အစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့် (State list) သည် ပြည်နယ်အတွင်း ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စက်ရုံ၊ တရား ဥပဒေစိုးမိုးရေး…etc … များဖြစ်ကြပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင် ဖယ်ဒရယ်အစိုးရ လုပ်ပိုင်ခွင့် ၁၈ ချက်မှ အပ ပြည်နယ်အစိုးရမှ အားလုံးပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာအား တဖက်သတ်ပြ ဌာန်းလုပ်ပိုင် ခွင့်အာဏာ (Exclusive Power) အဖြစ် သတ်မှတ်လေ့ရှိပါသည်။ ဗဟိုအစိုးရမှ ဝင်ရောက်စွက် ဖက်လေ့မရှိကြပါ။
ထပ်တူအညွှန်းပြုအာဏာ (Concurrent list) သည် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရကြား ပူးတွဲ လုပ်မှရ မည့်အရာ၊ တဖက်သတ်လုပ်၍ မပြီးပြတ်နိုင်သောအရာများ အား ဆိုလိုပါသည်။ ဥပမာ- အခွန်ကောက်ခံပိုင်ခွင့် အာဏာ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးရာများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးရာများ၊ ကြေးငွေချေးငှားခြင်းအ ရာ စသည်တို့ဖြစ် ပါသည်။
ထို့ပြင် ကြွင်းကျန်အာဏာ (Residuary Power) များအား ဗဟိုအစိုးရလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပြည်နယ် အစိုးရ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ မည်သည့်နေရာ၌ ထားရှိရမည့်အကြောင်းများ လည်း ရှိပါသေးသည်။ စစ်မှန်သော Federation စံနစ်နိုင်ငံများတွင် ဗဟိုအစိုးရအား အာဏာကန့်သတ်ပေးထား သည့်ဖြစ် ရာ ပြည် နယ်လုပ်ပိုင်ခွင့်၌ ထားရှိခြင်း သည် ပိုသင့်တော်သည်ဟု နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာ ရှင်များက ယူဆလေ့ရှိကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကြွင်းကျန်အာဏာ အား ပြည်နယ်မှမပိုင်ဆိုင်လျှင် စစ်မှန်သောဖယ်ဒရယ်စံနစ်မဟုတ်ဟု ယူဆသူများလည်း ရှိပါသေးသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးသားထားရှိခြင်းသည် ဖယ်ဒရယ်နိုင်ငံတော်၏ အာမခံချက်ဖြစ် သည်။ နိုင်ငံ တော်စာ ချုပ်အား ပါဝင်ထည့်သွင်းအကျုံးဝင်စေရမည်။ ဗဟိုအစိုး ရနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရ ကြားလုပ်ပိုင်ခွင့်နယ်ပယ် မရှုပ်ထွေး စေရန် တိကျရှင်းလင်းစွာရေးသားဖော်ပြထားရမည်။ ထို့ကြောင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ လည်း ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်၏ အာမခံချက်၊ အသက်သွေးကြောတမျှ အရေး ပါနေသော ကြောင့် တင်းကျပ်သည့်ဥပဒေဖြစ်ရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။ တဖက် သတ်ပြုပြင်၊ ပြောင်းလဲ၊ ဖြည့်စွက်၊ ဖျက် သိမ်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း များပြုလုပ်ခွင့် မရှိပဲ ပြည်နယ် အစိုးရအများစု၏ ဆန္ဒအရ သာပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ခိုင် မာတင်းကြပ် မှုရှိရမည် ဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအကြား လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာများ သီးခြားပြ ဌာန်းထားရှိခြင်း၊ ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရများ၏ အုပ်ချုပ်ရေးစံနစ် တခုလုံးနှင့် ၎င်းတို့မှထုတ်ပြန်သော ဥပ ဒေများ၊ အမိန့်အာဏာများအာလုံး ဖွဲ့စည်းအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်မှု မရှိပဲ လိုက်လျှောညီထွေ လုပ် ဆောင်ရ မည်ဖြစ်သဖြင့် အထွဋ်အမြတ်ထား ထိန်းသိမ်းရန် အထူးလို အပ်ပါသည်။
ဖယ်ဒရယ်စံနစ်တွင် သီးခြားလွတ်လပ်၍ စွမ်းအင်ရှိသောတရားရေးစံနစ်တည်ရှိရန် အထူးလိုအပ်ပါ သည်။ ဗဟိုတရားရုံး (Supreme Court) သည် ဗဟိုနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရများမှ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအား သစ္စာရှိစွာ လေးစား လိုက်န်ာဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိအား မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဗဟိုတရား ရုံးသည် ဖွဲ့စည်းပုံ ခြေခံဥပဒေအပေါ် အုပ်ထိန်းသူအဖြစ် ရပ်တည်ပြီး၊ ဥပဒေအကြောင်းအရာများ အား ရှင်းလင်း ခြင်း၊ ဥပဒေအ ကြောင်းအရာများ လွဲမှားစွာကောက်ယူ အဓိပါယ်ဖွင့်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများ အပေါ် ဆုံးဖြတ် ချက်ချရမည်ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် သီးခြား လွတ်လပ်သောတရားရေးစံနစ်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသည် ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်အောက်မှ လွတ်မြောက်လာချိန်၌ လွတ်လပ်၍ အချုပ် အချာ အာဏာပိုင် ဆိုင်သော နိုင်ငံ အဖြစ် ပေါ်ထွန်း လာပါသည်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံသဘော သဘာဝအား လေ့လာမည်ဆိုလျှင် ပင်လုံစာချုပ်နှင့် ၎င်းစာချုပ်၌ လက်မှတ်ရေး ထိုးလာခဲ့သော အမျိုးသား ခေါင်း ဆောင်များ ၏ စိတ်ဓါတ်ကိုပါလေ့လာရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
ပင်လုံစာချုပ်သည် အထူးသဖြင့် လွတ်လပ်၍သီးခြားဖြစ်နေသော နယ်ပယ်ကြီး (၄) ခုကို အခြေခံထား ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ချင်းတောင်တန်းအက်ဥပဒေ ၁၈၉၆ (The Chin Hills Regulation – 1896) ဖြင့် အုပ်ချုပ် သောနယ်မြေ၊ ကချင်တောင်တန်းဒေသဥပဒေ (The Kachin Hill Tribes Regulation) ဖြင့် အုပ်ချုပ်သော နယ် မြေ၊ ပြည်ထောင် စုရှမ်းပြည်အက်ဥပဒေ (Federated Shan States) ဖြင့် အုပ်ချုပ်သောနယ်မြေနှင့် The Gorvernment of Burma Act, 1935 ဖြင့် အုပ်ချုပ်သောနယ်မြေများမှ အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ သ ဘောတူလက် မှတ်ရေးထိုးကာ ဘုံအကျိုးစီးပွားကိုမျှော်ကိုး၍ အချုပ်အချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတော် တည်ထောင် ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ပြည်နယ်များပေါင်း စုထားသည့် ပြည်ထောင်စု (Federal) စံနစ်နိုင်ငံတော် အဖြစ် ပေါ်ထွန်း လာပါသည်။
(၅) နယ်နမိတ်သတ်မှတ်ပြီးပြီးခြင်း မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံလက်တွင်ရှိတဲ့ အခွင့်အာဏာများ၊ ကချင် အမျိုးသားများ လက်သို့ပေး အပ်ရန်နှင့် မြန်မာပြည်ကြားဖြတ် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ကချင်အမျိုးသား ဝန်ကြီးတစ်ဦး ခန့်အပ်ရန်။
(၇) အထက်မှာ ဖော်ပြတဲ့အတိုင်း မြန်မာအမျိုးသားအားလုံး လွတ်လပ်ရေးရသည့်အခါ သီးခြား လွတ်လပ်သည့် ကချင်နိုင်ငံအပါအဝင် လွတ်လပ်သည့်မြန် မာပြည်ထောင် စု အစိုးရဖွဲ့စည်းရန်။
ကချင်အမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်များ ပင်လုံသို့ရောက်ရှိပြီး၊ ရှမ်းအမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် 6th February 1947 မွန်းလွဲ ၂ နာရီ၌ ဆွေးနွေးပြီး အောက်ပါ အချက်အလက်များအား ကချင်၊ ရှမ်းကော်မီတီမှ ဆုံး ဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
(၂) အမှုဆောင်ကော်မီတီတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသော ရှမ်းကိုယ်စားလှယ်နှင့် ကချင်ကိုယ်စား လှယ်တို့သည် မိမိတို့လူမျိုးအသီးသီး၏ ပြည်တွင်းရေး ရာအားလုံး အတွက် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်ကြရမည်။ ထို့အပြင် ကာကွယ် ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး၊ မီးရထား၊ အကောက်တော်အစရှိသော အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စများ အတွက် အား လုံးစုပေါင်းတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ကြရမည်။
(၃) ဆုံးဖြတ်ချက် (၃) နှင့် ပတ်သက်၍ ကချင်တောင်တန်းဒေသတွင် အကျုံးမဝင်သည့် မြစ်ကြီးနား၊ ဗန်းမော် ခရိုင်နှင့် ကသာမြေပြန့်ဒေသများမပါဘဲ ကချင်ပြည် ဟု ပြည်နယ် တခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင် လိမ့်မည်ဟု မိမိမယုံ ကြည်ကြောင်း၊ သို့သော် မိမိအနေဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိသော်လည်း ကချင်လူ မျိုးများလိုလားတောင့် တလျက်ရှိ သည့် ကချင်ပြည်နယ်ဖြစ် လာရေးကို လေးစား၍ မူအားဖြင့် မိမိထောက်ခံကြောင်း၊ ယင်းကိစ္စကိုလည်း ရက် သတ္တပတ်အနည်းငယ် အတွင်း ရန်ကုန်၌ ကျင်းပမည့် ဖဆပလညီလာခံတွင် မိမိကိုယ်တိုင်အဆိုတင်းသွင်း မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား ရာကိုယ်စား လှယ်များက တခဲနက်သြဘာပေးကြသည်။
(၅) ဆုံးဖြတ်ချက် (၅) ခွဲထွက်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက မူအားဖြင့်လက်ခံပြီး ဤအစည်းအ ဝေးက ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊ တိုင်းပြုပြည်ပြု တွင် တင်သွင်း၍ ဆုံးဖြတ်ရ မည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းတင်ပြ ရာ အများလက်ခံကြသည်။ နောင်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ခွဲထွက်ခွင့်သည် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစု အခွင့်အရေးဖြစ်ပြီး မခွဲထွက်ချင်အောင် ဗမာလူမျိုးကြီးက လုပ်ပြရမည်ဟု ပြောဆိုလာသည်အထိ ခွဲထွက်ခွင့် ကိစ္စကို အမျိုးသားသွေး စည်းညီညွတ်ရေး အတွက် အလေးပေးထားကြောင်း တွေ့ရသည်။
တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တင်ပြသော အရာများအားအချော ကိုင်တင်ပြ မှု ပြု၍ အတည်ပြု ပြီးသည့် အပြင် မြန်မာဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီ မှ အဖွဲ့ဝင်အချို့နှင့် စပ်ဖများအားလုံး တို့အပြင် ရှမ်းပြည် နယ်များ၊ ကချင်တောင်တန်းဒေသများနှင့် ချင်းတောင် တန်းဒေသတို့မှ ကိုယ်စားလှယ် များတက်ရောက် ကြသော ပင်လုံမြို့ တွင်ကျင်း ပသည့်အစည်း အဝေးတွင် ကြားဖြတ်မြန်မာအစိုးရနှင့် ချက်ချင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ချင်းတို့ သည် လွတ်လပ်ရေးကိုပိုမို၍ လျှင်မြန်စွာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု အစည်းအ ဝေးတက်ရောက် သူအဖွဲ့ဝင်တို့သည် ကန့်ကွက် သူမရှိပဲအောက်ပါအတိုင်းသဘော တူညီကြလေသည်။
(၃) အဆိုပါအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ၎င်းနှင့်လူမျိုးချင်းမတူသော ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးက ကူညီစေရ မည်။ ရှေးဦးစွာ ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့သည် ၎င်းတို့အသီးသီးသက်ဆိုင် သည့်နယ်များ၏ ကိစ္စရပ်များ ကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်၍၊ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်မှာ အခြားနယ်စပ်ဒေသ အားလုံးတို့၏ ကိစ္စရပ်များ ကို ဆောင်ရွက် စေရန် ဖြစ်သည်။
(၄) အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင်လူကြီးအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ များ၏ တဦး တည်း သောကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သော် လည်း၊ ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် နယ်စပ်ဒေ သများနှင့် သက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကြသည့်အခါ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် တက်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိစေ ရမည်။
(၇) နယ်စပ်ဒေသများ၏ နယ်သူနယ်သားတို့သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် အခြေခံများအဖြစ် အသိမှတ်ပြု ထားပြီးသော အခွင့်အရေးများတို့ကို ခံစားပိုင် ခွင့်ရှိစေရမည်။
(၈) ဤစာချုပ်တွင် သဘောတူညီကြသည့်အစီအစဉ်မှာ ပဒေသရာဇ်ရှမ်းပြည်နယ်စုတွင် ယခုအပ် နှင်းထားပြီး သော ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ် ချုပ်ရေးကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်။
(၉) ဤစာချုပ်တွင် သဘောတူညီကြသည့်အစီအစဉ်တို့မှာ မြန်မာပြည်အခွန်တော်ငွေများမှ ကချင်တောင်တန်း နယ် များနှင့် ချင်းတောင်တန်းနယ်များက ရသင့်ရ ထိုက်သော ဘဏ္ဍာရေး အကူအညီကို ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။ မြန်မာပြည်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြေစု၏ ဘဏ္ဍာရေးအစီစဉ် မျာကဲ့သို့ ကချင်တောင်တန်းနှင့် ချင်းတောင်တန်းများတို့ အတွက် အလားတူ အစီအစဉ်များကို ထားရှိကျင့်သုံးရန် ဖြစ်နိုင်မည် မဖြစ်နိုင်မည်ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင် ကောင်စီက၊ နယ်စပ်ဒေသ များ၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့်အတူ စစ်ဆေးကြည့်ရှုရ မည်။
ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ဗမာပြည်မနှင့် တောင်တန်းဒေသ နယ်မြေများ သည် နိုင်ငံ တခုတည်း အဖြစ် ပူးပေါင်းထားခြင်းမရှိသေးပေ။ သို့သော် လည်း တိုင်းပြုပြည်ပြု လုပ်ငန်း များနှင့် ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီး၊ အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားကြ မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင် ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်း သားခေါင်းဆောင်များသည် ပင်လုံစာချုပ်ပဋိညာဉ်များ၊ ပင်လုံစာ ချုပ်နှင့် ဆက်စပ် သည့်စာချုပ်တွင် ဖော်ပြမထားသည့်သဘောတူညီချက်များ၊ ပင်လုံစာချုပ်နှင့် ဆက်စပ် သည့် စာချုပ်တွင် ဖော်ပြ မထားသည့်သဘော တူညီ ချက်များ၊ ဆွေးနွေးချက်များအားလုံးကို ပင်လုံစိတ်ဓါတ်ကပင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး အမျိုးသားသွေးစည်းညီ ညွတ်ရေးကို အခိုင်အမာတည်ဆောက် နိုင်ကြပြီး လွတ်လပ် ရေးကိုလည်း တပြိုင်တည်းဆွတ်ခူးနိုင်ဘို့ အမိအရတွန်းပို့နိုင် ခဲ့ပေသည်။
19th April, 1947 မေမြို့၌ တောင်တန်းသားများစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဦးစီးအဖွဲ့တည်ခင်းသော ညစာ၌ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းတက်ရောက်ကာ “ ပင်လုံတွင် ပေးခဲ့သော ကတိအတိုင်း ဆက် လက်ဆောင်ရွက်မည်ကို ယုံ ကြည်စေလို ကြောင်း၊ (၁၀) နှစ် အချိန်ပေးစေလိုကြောင်း၊ ထို (၁၀) နှစ် အတွင်း တောင်တန်းဒေသများကျေနပ် မှုရှိလာအောင် ဆောင်ရွက်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ်ရေးရလျှင် ရှမ်းခေါင်းဆောင်အား သမ္မတတင်မြှောက် ၍ ကရင်အမျိုး သားအား စစ်သေနာပတိခန့်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တောင်တန်းဒေသခေါင်းဆောင်များအား ဝန် ကြီးများ အဖြစ်လည်း တင်မြှောက် မည်ဖြစ်ကြောင်း ” စသဖြင့် ပြွက်ကြားခဲ့ခြင်းကြောင့် တိုင်းရင်းသားများ ပိုမို စည်းလုံးမိကြသည်ဟု ဆိုကြပါ သည်။ 20th, 21th, April 1947 တွင် ချင်းကိုယ်စား လှယ်များ တင်သွင်းသော အ ချက်များတွင်၊ (၁) ပြည်ထောင်စု (Federal) အသွင်ဖြင့် ပူးပေါင်းခြင်း ဖြစ်ရမည်။ (၂) အချိန်မရွေးခွဲထွက်နိုင်ခွင့် ရှိရမည်ဟူသော အချက်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။
14th November, 1946 တွင် ဘုရင်ခံထံ၌ ရှမ်းစော်ဘွားများပေးပို့သော စာတွင်လည်း “ဗမာပြည်နှင့် ပြည်ထောင်စုစံနစ်အရ ပေါင်းမည်။ သို့ရာတွင် –
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များသည် အမြော်အမြင်ကြီးမားစွာ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြပြီး၊ 1947, February, 12th ၌ ချုပ်ဆိုခဲ့သော ပင်လုံစာချုပ်၏ ပင်လုံစိတ်ဓါတ် အဓိက အနှစ်သာရအ ချက်မှာ –
(၁) သီးခြားစီတည်ရှိသော ဗမာပြည်မနယ်မြေ၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြေ၊ ကချင်တောင်တန်းနယ်မြေ၊ ချင်းတောင်တန်း နယ်မြေ (၄) ခု တပြိုင်တည်း လွတ်လပ်ရေး ရယူရန်နှင့်
(၂) တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများ တန်းတူရည်တူ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ အပြည့် အဝရှိပြီး စစ် မှန်သောဒီမိုကရေစီဖယ် ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ရေး အခြေခံအချက် နှစ် ချက်ပင် ဖြစ်သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ကျင်းပသောဖဆပလညီလာခံတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဗဟိုကြိုး ကိုင် ပင်မပြည်ထောင်စု (Unitary State) ဖွဲ့စည်းရန် မသင့်ဟုအတိ အလင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့ရာ တွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကျဆုံးပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် မေ့လျှော့ပစ်ကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျဆုံးပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းလမ်းကြောင်းတလျှောက်သည် အထူး ပြောစရာရှိမည် မထင်ပါ။ ဦးနုဦးဆောင်သော ဖဆပလ အစိုးရ သည် ၁၉၄၇ ပင်လုံစာချုပ်ကို အခြေခံသည်ဟု ဆိုသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ဦးချန်ထွန်းဦးဆောင်၍ ရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်အလက်များအား လိုတမျိုး၊ မလိုတမျိုး အဓိပါယ်ဖွင့်ဆို၍ ရေးဆွဲထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဦးချန်ထွန်းဦးကိုယ်တိုင်ကပင် “ ကျတော်တို့ရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေဟာ သဘောတရားအားဖြင့် ပြည်ထောင်စုစံနစ် (Federal Form) ဖြစ်ပေမဲ့ လက်တွေ့ တွင် တပြည်ထောင်စံနစ်ဖြစ်ပါတယ် ” ဟု ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်း ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ရာဇဝင်ပါမောက္ခဟောင်း မစ္စတာတင် ကားက သူ၏ “ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ” စာအုပ် တွင် ဤကဲ့သို့ဖော်ပြထားပါသည်။ (The Constitutional Adviser, Chan Htoon, observed much later that “ Our Constitution, though in theory federal, is in practice unitary ” )( The Union of Burma by Hugh Tinker. Page 30)
သို့ရာတွင် တိုင်းရင်းသားများအမြဲတမ်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက် ဆွဲကိုင်လာခဲ့သော ခွဲထွက် ခွင့် နှင့် ပတ်သက်၍ ပစ်ပယ်ခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ပါ။ ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အခန်း (၁၀) တွင် ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်နှင့် အခန်း (၁၁) တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲပိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း အတိ အလင်း ပြဌာန်းထားသည်။ အကယ်၍ ပြည်နယ် များသည် ခွဲထွက်ခွင့်တောင်း လာပါက နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်သည်ပင်လျှင် ပယ်ချပိုင်ခွင့်မရှိ ပေ။ ပြည်နယ်တိုင်း ရင်း သားခေါင်းဆောင် များသည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ ပြည်တွင်းစစ်ပြင်းထန်စဉ်က ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနု၏ စစ်တပ်အင်အားသည် တပ်ရင်းတစ်ရင်းနှင့် တဝက်သာကျန်ရှိပြီး၊ ၁၂ မိုင်အစိုးရ ဟုခေါ်တွင်ခံရ သည့်အချိန်တွင် ပင် ကချင်၊ ကယား၊ ရှမ်း၊ ချင်း၊ ပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်များ သည် ပြည်ထောင်စု အစိုးရနှင့် လက်ချင်း ယှက်ပြီး မိမိတို့တွင်ရှိသော အင်အားတပ်ရင်း (၈) ရင်း ဖြည့်တင်း ပြီး ပြည်ထောင်စုကို ဖက်တွယ် စုပေါင်းကာကွယ်နိုင် ခဲ့ကြသည်။ ပြည်နယ်ခေါင်းဆောင်များသည် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ အခန်း (၁၀) တွင် ခွဲထွက်ခွင့်ပြ ဌာန်းထားသော်လည်း ခွဲထွက်ခွင့် တကြိမ်တခါမျှ တောင်း ခံတင်ပြခြင်း အသုံးမပြုခဲ့ပေ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် တိုင်းရင်း သားခေါင်းဆောင်များချမှတ်သော ပင်လုံစိတ် ဓါတ်ပါရှိ သည့်အတိုင်း တိုင်းရင်းသားများ တန်းတူ ရည်တူ စစ်မှန်သောပြည်ထောင် စု ပြန်လည် တည်ထောင်လိုခြင်းသည် ဥပဒေ ဘောင် အတွင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းပင် ဖြစ် သည်။
၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂ ရက်နေ့၊ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းအာဏာသိမ်းခဲ့စဉ်က သမ္မတကြီးမန်းဝင်းမောင်၊ ဝန် ကြီးချုပ်ဦးနု၊ ဝန်ကြီးအများအပြားအပါအဝင် စုစုပေါင်း (၅၁) ဦး ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။ ရှမ်းပြည်လွတ်လပ် ရေးအဖွဲ့ (ရပလ) လူငယ်များကိုပင် ချမ်းသာမပေးပဲ အားလုံးဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းသည့် မတ် လ (၂) ရက်၊ နံနက် (၄) နာရီအချိန်တွင် စစ်တပ်သည် သမ္မတဟောင်းညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီး စစ်ရွှေသိုက် နေထိုင် သည့် နေအိမ်ခြံဝင်းကို ဖောက်ဝင်ပြီး၊ လေးဘက်လေးတန်မှ ပစ်ခတ် သဖြင့် စော်ဘွားကြီးသားတော်၊ သားလတ် စစ်မီမီ (၁၇) နှစ်အရွယ်ပင် ကျဆုံးခဲ့ရရှာသည်။ ဗိုလ်နေဝင်းလက်ထက်ကာလတွင် ဖက်ဒရယ်သည် ခွဲထွက်ရေး၊ တိုင်းပြည်ဖြိုခွဲရေးဖြစ်ကြောင်း၊ မဟုတ်မမှန်ဝါဒဖြန့်ချီခြင်းလုပ်ရပ်နှင့် တိုင်းရင်းသားနယ်မြေများတွင် စစ်တပ်ကမတရားနှိပ်စက်၊ လုယက်ဖျက်ဆီး၊ သတ်ဖြတ်မုဒိန်းကျင့်ခြင်းလုပ်ရပ်ကြောင့် ဗမာတိုင်း ရင်းသားအများစုနှင့် အခြားလူမျိုးစုများအကြား စည်းလုံးညီညွတ် ရေးပျက်ပြားရန် သပ်သျှိုဖြိုခွဲနိုင် ခဲ့သည်။
ဗိုလ်နေဝင်းဦးဆောင်သော မဆလတပါတီအာဏာရှင်စစ်အုပ်စုသည် ပြည်သူတရပ်လုံးအပေါ် ဖိနှိပ် ကျွန်ပြုနိုင် ရန်အတွက် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက်ရေး ဆွဲပြဌာန်းလိုက်သည်။ ယင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေသည် တပြည်ထောင်စံနစ်ဖြစ်သည့်အပြင် တပါတီအာဏာရှင်စံနစ် လည်းဖြစ် သဖြင့် တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ မူလအခြေခံရပိုင်ခွင့် အခွင့် အရေး များသာမက ဒီမိုကရေစီအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးဟူသ မျှလည်း လုံးဝဆိတ်သုန်းသွားခဲ့ သည်။
မဆလတပါတီအာဏာရှင်စံနစ်အုပ်စိုးသည့် ၂၆ နှစ်ကြာ ပြည်သူတရပ်လုံးအပေါ် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစ သည့် ဒီမိုကရေစီအခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများ နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖိနှိပ်ထိန်း ချုပ်ထားသော်လည်း နိုင်ငံ ရေးအသိအမြင် နိုးကြားကြသည့် ရဟန်းသံဃာများ၊ နိုင်ငံရေးသမား များ၊ ကျောင်းသားလူငယ်များ၊ အလုပ်သမားနှင့် ပြည်သူလူထုများ အချို့တို့သည် ဒီမိုကရေစီ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးအတွက် အာဏာရှင်စံနစ်ကိုအကြိမ် ကြိမ်ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြတိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့ကြသည်။
(၁) ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇) ရက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသပိတ်။ (စစ်အာဏာရှင်က ငြိမ်းချမ်း စွာဆန္ဒ ပြသော ကျောင်းသား/ သူများကို ပစ်သတ်သဖြင့် ရာနှင့်ချီပြီး သေဆုံးသွား သည်။ ကျောင်း သားသမဂ္ဂအ ဆောက်အဦးကို ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးလိုက်သည်။ အများအပြား ဖမ်းဆီးထောင် ချခြင်း ခံရ သည်။)
(၂) ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဗကပ (၅) ခရိုင်နှင့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (၁) ခရိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒပြပွဲ (အများ အပြား ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံကြရသည်။)
(၃) ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ကျောင်းသားပွဲ အဓိကရုဏ်း။
(၄) ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင် တရုတ် – ဗမာ အရေးအခင်း။
(၅) ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ဆန်လုပွဲပြသာနာ (စစ်တပ်မှ ပစ်ခတ်သဖြင့် ရခိုင်အမျိုးသား များ အများ အပြားသေဆုံးသွားသည်။ မဆလစစ်အုပ်စုသည် ဆန်ပြတ်လပ်သည့်ပြသာနာ ကို ပြည်သူ လူထုအာရုံပြောင်း လဲအောင် တရုတ် – ဗမာအရေးအခင်းတရပ် ဖန်တီးလိုက်သည်။)
(၆) ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ အာရှကျွန်းဆွယ်အားကစားဆန္ဒပြပွဲ။ (အများအပြား ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း ခံရသည်။)
(၇) ၁၉၇၀ ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ရွှေရတုလှုပ်ရှားမှု။
(၈) ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ ဂုံနီအိတ်စက်ရုံအလုပ်သမားနှင့် အင်းစိန်မီးရထားစက်ရုံအလုပ်သမားသပိတ်။ (အများအပြား အလုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းခံရသည်။ )
(၉) ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီကမာရွက်ဂါတ်တဲ မီးရှို့မှု။
(၁၀) ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်၊ အလုပ်သမားသပိတ်။ (အများအပြား အလုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံရသည်။)
(၁၁) ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ဦးသန့်အရေးအခင်း။ (သေနတ်အသံ မမည်စေရဟုပြောပြီး စစ်တပ်က ကျောင်း သားလူငယ်များကို ဘက်နက်ဖြင့်ထိုးသတ်ခဲ့သည်။ အများအပြား ဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်း ခံကြရသည်။ ယင်းအ ချိန် ချင်းအမျိုးသားကျောင်းသားလူငယ်များ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုတွင် ပိုမိုစုစည်းမိကြသည်။)
(၁၂) ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ အလုပ်သမားနှင့် ကျောင်းသားရွှေတိဂုံသပိတ်။ (အများအပြားကျောင်း ထုတ်ခြင်း၊ အ လုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသည်။)
(၁၃) ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၃ ရက်၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း မှိုင်းရာပြည့်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု။
(၁၄) ၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ဗိုလ်ကြီးအုန်းကျော်မြင့် လှုပ်ရှားမှု။
(၁၅) မန်းငွေအောင်၊ မန်းဒါဝိတ်လှုပ်ရှားမှု။
(၁၆) ၁၉၈၃ ခုနှစ်၊ ဒုတိယမြောက် မန်းငွေအောင်လှုပ်ရှားမှု။
(၁၇) ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ပြည်လုံးကျွတ် ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးစသည့် ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲများ အသီးသီးပေါ် ပေါက်ခဲ့သည်။ (နိုင်ငံအနှံ့အပြား ပစ်သတ်ခြင်းခံ ရသဖြင့် ထောင်နှင့်ချီပြီး သေဆုံး ခဲ့ကြသည်။ သောင်းနှင့် ချီပြီး လွတ်မြောက်နယ်မြေနှင့် နိုင်ငံတကာ သို့ ရောက်ရှိသွားကြ သည်။ ထောင်နှင့်ချီပြီး ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထောင် ချ ခြင်းခံရကြသည်။)
နောက်ဆုံး ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသား၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်း စုံ ပြည်သူတရပ် လုံးမခံမရပ်နိုင် သည့်အဆုံး ပြည်လုံး ကျွတ်ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံကြီးကြောင့် မဆလ တပါတီ အာဏာရှင်စံနစ်လည်း ဘုန်းဘုန်းလဲကျဆုံးပြီး နိဂုံးချုပ်သွားတော့သည်။ ယင်းတို့ စိတ်ကြိုက်ရေး ဆွဲထားသော ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကိုလည်း ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖျက် သိမ်းလိုက်ရသည်။
သို့သော် ဖယ်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်လိုသော စိတ်ဓါတ်နှင့် ပင်လုံစိတ်ဓါတ်တို့သည် မီးဇာ မကုန်၊ ဆီမီးခမ်းသွားခြင်းလည်း မရှိသေးပဲ မြန်မာနိုင်ငံ တဝှမ်းခေတ် အဆက်ဆက် တမြေ့မြေ့တောက်လောင်နေ ဆဲဖြစ်နေပါသည်။ ၎င်းအတွက် ကြိုးပမ်းတိုက်ပွဲဝင်လာ ခဲ့သည်မှာ လည်း ခေတ်အဆက်ဆက် လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့ကြ ရာ ထင်ရှားသော သာဓကအချို့အား တင်ပြပါမည်။
(၁) ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁ – ၁၂) ရက်နေ့ထိ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲနှင့် နောက်ဆက်တွဲ၊ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၃ – ၁၂) ရက်ထိ ပင်လုံညီလာခံသဘောတူညီချက် (၅) ချက်။
(၂) ၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁ – ၁၂) ရက်နေ့ထိ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ အားလုံးပါ ဝင်သော တောင်ကြီး ညီလာခံ။
(၃) ၁၉၉၀ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၉) ရက်နေ့၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ပူးတွဲသဘော တူကြေငြာ စာတမ်း။
(၄) ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၇ – ၁၄) ရက်နေ့၊ တိုင်းရင်းသားေ ခါင်းဆောင်များအားလုံး ပါဝင်သော ကော် သူးလေပြည်နယ်၊ မယ်သရောထသဘော တူညီ ချက် ကြေငြာစာတမ်း။
(၅) ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့၊ အမျိုးသားအင်အားစုနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်အားစု၊ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၂၃) ဖွဲ့ပါဝင်သော သူးမွဲကလိုး သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်။
(၆) ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၆ – ၃၀) ရက်နေ့၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းအသီး သီးမှ ခေါင်းဆောင်များပါဝင်သော လော်ခီးလာ သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေငြာ ချက်။
(၇) ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၂) ရက်နေ့၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အဖွဲ့ အစည်းပေါင်း (၄၂) ဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် (၁၀၄) ဦး ပါဝင်လက်မှတ်ရေး ထိုးထုတ်ပြန်သော အခြေခ မူ (၈) ချက်တို့သည် ပင်လုံစိတ်ဓါတ် ကို အခြေခံ၍ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ ဖယ်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ရေး တို့ကို တခဲနက်တောင်း ဆိုသော ခေတ် အဆက်ဆက်မှ မြန်မာပြည်သူလူထု၏ တသွေးတသံသာဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ညီညွတ်၍ စည်း လုံးသော ဖယ်ဒရယ်နိုင်ငံတည်ထောင်ခြင်းသည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၏ အ ခြေခံ မူလသဘာဝပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေတ် မှတင်ရှိ ခဲ့သော နိုင်ငံရေးအကြွေးဖြစ်ပြီး ယနေ့ ခေတ်အထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် ရန်တင်ရှိနေသေးသော သမိုင်းပေးတာဝန် ကြီးတရပ် ဖြစ်ပါ သည်။
This entry was posted on April 22, 2013, in မှတ်စုမှတ်ရာများ, နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မိတ္ထီလာအကြမ်းဖက်မှု ရုပ်သံများ	တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားမီဒီယာ အခန်းကဏ္ဍ ဆွေးနွေးမည် →